Kitra – Amboaran’ny Caf: nandihizan’ny Elgeco Plus ny Deportivo Unidad | NewsMada
Kitra – Amboaran’ny Caf: nandihizan’ny Elgeco Plus ny Deportivo Unidad
Tontosa, omaly alarobia tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina, ny lalao mandroso savaranonando, amin’ny fiadiana ny “Amboaran’ny kaonfederasiona afrikanina”, baolina kitra, nifanandrinan’ny Elgeco Plus sy ny Deportivo Unidad avy any Ginea Ekatorialy. Nibata fandresena ny Malagasy.
Tsara ny vokatra ho an’ny ekipan’ny Elgeco Plus. Isa 3 no ho 1 ny nandavoan’ny ekipa malagasy ny ekipan’ny Ginea Ekatoraly. Nisy ihany ny lesoka teny am-panombohan’ny lalao ka namonoan-dry zareo Gineanina ny baolina voalohany. Tandrevaka sy tsy fitandremanana nataon’ny vodilaharana sy ny mpiandry tsatoby malagasy ny nahazoany penalty, teo amin’ny faha-7 minitra nilalaovana ka nampikobana ny harato ho an’ny Deportivo Unidad. 3 minitra taty aoriana anefa, namaly ny ekipa malagasy ary namono ny baolina voalohany tamin’ny alalan’i Nesta, laharana faha-18. Maro ny baolina mbola tokony ho tafiditra ho an’ny Malagasy, saingy tsy ampy ny fitandremana. Tamin’ny isa 1 no ho 1 ny nisarahan’ny roa tonta, teo amin’ny ampaham-potoana voalohany.
Hita ho efa nihareraka ny ekipa roa tonta teo amin’ny ampaham-potoana faharoa. Na teo aza izany, tsara vintana ka nahatafiditra ny baolina faha-2 i Bila, 5 minitra nanombohan’ny ampaham-potoana faharoa. Nisesisey ny fanafihana ho an’ny Malagasy, saingy manary baolina matetika ny mpilalao ka very maina avokoa izany. 10 minitra nilalaovana, ampaham-potoana faharoa, nahafaty baolina indray i Nesta. Baolina faha-2 nampidiriny ity ary nampitombo ny isa ho 3 no ho 1. Nanomboka kivy ny Deportivo Unidad avy any Ginea Ekatoraly. Nanomboka teo, na izany aza, maro ihany ny fanafihana nataon’izy ireo, saingy tsy nahatafiditra baolina hatramin’ny ora farany ny Gineanina. Nisaraka tamin’ny isa 3 no ho 1, araka izany, ny roa tonta.
Afa-po amin’izao vokatra azony izao ny mpilalao ao amin’ny Elgeco Plus na mbola misy aza ny mila harenina. “Nanao ny ainy tsy ho zavatra ny mpilalao tsirairay ka nahazoana izao fandresena izao. Ekena anefa fa maro ny lesoka sy ny tsy fitandremana, indrindra teo amin’ny vodilaharana, saingy vonona izahay hanarina izany amin’ny lalao miverina”, hoy ny nambaran-dRaveloarison Dino, kapiteny ny Elgeco Plus, taorian’ny fiakarana an-kianja.